बहुजातीय समाजमा टिक्दैन अधिनायकवाद - फ्री प्रेस नेपाल
बहुजातीय समाजमा टिक्दैन अधिनायकवाद
८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०४:५१
in अन्तर्वार्ता, बिचार, राजनीति, विविध
– सिके लाल
साँस्कृतिक प्रतीकको रूपमा मानिने राजाको अधिनायकवाद एकल जातीय राज्यमा मात्र टिक्न सम्भव छ । निर्वाचित अधिनायकवाद पनि एकल जातीय वर्चश्व भएको ठाउँमा मात्रै सहजतापूर्वक चल्ने हो । तानाशाही व्यवस्था एकल जातीय सेनाको वर्चश्व भएको ठाउँमा मात्र चल्छ । सर्वसत्तावाद त झन चीन र कोरिया जस्तो एकजातीय वर्चश्व भएको ठाउँमा मात्रै टिक्ने हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णयलाई केहीले संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गरेको भने पनि यथार्थ त्यो होइन । किनभने उनको नाम सिफारीश गर्ने संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता र न्यायपालिकाका प्रतिनिधि सदस्य छन् । त्यस्तो विज्ञ समूहले सिफारीश गरेको नामलाई एउटा समितिले खारेज गरिदिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय संवैधानिक सर्वाेच्चता हो कि होइन भनेर निक्र्यौल गर्न हामीले त्यो के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक सर्वाेच्चताका कम्तिमा तीनवटा अवयव हुन्छन् । पहिलो, तिमी जतिसुकै माथि होउ कानून तिमीभन्दा माथि छ भन्ने हो । यसलाई ‘सुप्रिमेसी अफ ल’ भनिन्छ । दोश्रो, संवैधानिक सर्वाेच्चताको अवधारणाले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा शक्तिको विभाजन गरेको हुन्छ । तिनले एकअर्कालाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्छन्, र ती आफ्नो क्षेत्राधिकारमा स्वायत्त पनि हुन्छन् । यसलाई ‘सेपरेशन अफ पावर’ भनिन्छ । र तेश्रो, यी दुवैलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने एउटा सक्रिय नागरिक एवम राजनीतिक समाज हुन्छ । यी तीनवटै कोणबाट हेर्दा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथिको कारवाहीमा संवैधानिक सर्वाेच्चता देखिँदैन । बरु जोशी प्रकरणले दुईतिहाइ बहुमतको सत्ता कार्यपालिकामा मात्र हैन, विधायिका र न्यायपालिकामा पनि आफ्नो एकछत्र वर्चश्व राख्न चाहन्छ भन्ने देखाएको छ । व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ बहुमत भएको कार्यपालिका ‘हामी मनलागी गर्छौं, जसलाई जे गर्नु छ गर’ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसका लागि जुनसुकै हदसम्म जान यो सत्ता तयार छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
सरकार न्यायपालिकामा पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छ । हामीले संविधान नै यस्तो उटपटांग बनाएका छौं, संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको कसको सर्वाेच्चता हो थाहै हुँदैन । कार्यपालिकाको सर्वाेच्चता हो कि, विधायिकाको हो कि, अदालतको हो ? अथवा, यी तीनैवटा अङ्गभन्दा बाहिर बसेर ‘यसो गर, उसो गर’ भन्दै अह्राउनेहरूको ? संविधानमा सबैकुरा स्पष्ट छैनन् । शब्दहरू आफैँ बोल्दैनन्, तिनलाई अथ्र्याउनुपर्छ । अथ्र्याउने भनेको शक्ति हुनेहरूले हो । जोशी प्रकरणमा जसरी अथ्र्याउन खोजिएको छ, त्यसले उसै त कमजोर यो संविधानलाई झन् कमजोर बनाउने काम गरेको छ । यस्तो अस्पष्टतामा अदालत कार्यपालिकाको काममा तगारो हाल्ने संस्था हुनसक्थ्यो । त्यसलाई जोशी प्रकरणबाट तह लगाउने प्रयत्न गरियो । अब आउने कसैले हामी विरुद्ध औंला ठड्याउने हिम्मत गर्न नसकोस् भनेर यो कारवाही गरिएको छ । अदालतलाई नसीहत दिइएको रूपमा पनि यसलाई हेर्न मिल्छ । हामीले गर्ने काममा जो अगाडि आउँछ, त्यसलाई छाडिँदैन है भनेर अरुलाई पनि तर्साउन खोजिएको छ । प्रमाणबेगर बाहिर भनिहाल्न गाह्रो छ, तर व्यापक चर्चा के छ भने नेकपा दोहोरोले आफूसँग प्रतिबद्ध न्यायाधीशहरूका लागि बाटो खुल्ला गर्न जोशीलाई कारवाही गरेको हो । एकातर्फ हाम्रो विरुद्ध जान खोज्यौ भने तिम्रो नियति हुने भनेको यही होे भनेर तर्साउन खोजिएको छ भने अर्काेतर्फ आफ्ना समर्थकहरूका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने चाल चलिएको छ । आफ्ना समर्थकहरूको प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनाउन खोजिएको छ । अब आउने न्यायाधीशहरूमा नेकपा दोहोरोका समर्थकहरू आउन् भनेर यस्तो गरिएको हुनसक्छ । जहाँसम्म सर्टिफिकेटको कुरा छ, यो देशमा बिना कमजोरी को ठुलो पदमा पुगेका छन् र ? हाम्रो राज्य व्यवस्था नै यस्तो छ, यहाँ दागरहित मान्छे भेटिँदैन । अभियोग नलागेका व्यक्ति त मङ्गल ग्रहबाट ल्याए मात्रै हो । कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार, राज्यका अङ्गहरूमा संसदको हैन पार्टी सुप्रिमोको नियन्त्रण हुनुपर्छ । व्यस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, मिडिया सबैमा पार्टीको सर्वोच्च निकाय र नेतृत्वको नियन्त्रण हुनुपर्छ । दुईतिहाइले संसदमा नियन्त्रण भैसक्यो । मिडिया जहिल्यै सत्ताधारीको गुणगान गर्ने, एकजातीय वर्चश्व बचाउने अस्त्र भएकोले ऊ त्यसै आफ्नो नियन्त्रणमा छँदैछ । जोशी प्रकरणपछि न्यायालयमा पनि नियन्त्रण भयो । अहिले राज्यका अवयव अध्ययन गर्ने हो भने यहाँको स्थायी सत्ताले प्रचण्डलाई देखाउँदै सत्ताकब्जा गरेको छ । छट्टु स्यालले चील आयो चील आयो भन्दै गाँउलेलाई आकाशतिर देखाएर कुखुरा टपक्क टिपी भागे झैं ‘प्रचण्डले सत्ताकब्जा गर्न थाल्यो’ भन्दै वर्चश्वशालीहरूले आफैँले सत्ताकब्जा गरेका छन् । त्यो बेलाको एमालेको नेतृत्वमा रहेको वर्चश्ववादी समूहले यो ग¥यो । शुद्ध भाषामा भन्ने हो भने संवैधानिक रूपमा खस–आर्य भनेर चिनिने समुदायका सम्भ्रान्त जातीय समूहले सत्ताकब्जा गरेका छन् । कम्युनिष्टको आवरणमा जातिवादी समूहले कब्जा गरेको यो सत्ता कहिले शाह त कहिले राणाको नाममा तिनकै वर्चश्वमा रहँदै आएको थियो । प्रचण्डलाई पनि के लागिरहेको छ भने कम्युनिष्ट भएर सत्ताकब्जा गर्न नसके पनि कम्तिमा बाहुन बनेर त सत्ताकब्जा गरियोे । उनी त्यसैमा मख्ख छन् । कम्युनिष्ट राज्यको आधारभूत चरित्र पनि एकाधिकारवादी र जातीय राज्यको चरित्र पनि एकाधिकारवादी नै भएकोले कम्युनिष्टको नाममा जातीय राज्यलाई निरन्तरता दिई सर्वसत्तावाद कायम गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो संविधानसभालाई विभिन्न षड्यन्त्रले निष्प्रभावी तुल्याएर सिद्ध्याइयो । दोश्रो संविधानसभाले पश्चगामी संविधान बनायो । यसले यति हतारमा संविधान बनायो कि एउटा प्रावधानले एउटा कुरा गर्छ, अर्काे प्रावधानले अर्कै थोक भन्छ । पछिल्ला केही अभ्यासले दवावमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने समेत् देखाएका छन् । डाक्टर गोविन्द केसी प्रकरणले संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि कुनै शक्तिशाली व्यक्ति या समूहले दवाव दिनसके संविधान त्यसको अगाडि केही पनि होइन भन्ने साबित गरेको छ । त्यही कुरा अहिले दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रकरणमा पनि प्रकट भयो । संविधानमा लेखिएको शब्दको भन्दा शक्तिशालीहरूले के निर्णय गर्छन्, तिनमाथि कस्तो दवाव पर्छ, त्यसको अर्थ हुनेभयो । गोविन्द केसी प्रकरणबाट यो संविधान कति कमजोर रहेछ भन्ने देखिएको छ । भोलि गोविन्द केसीजस्ता अन्य कुनै निस्किए भने यसले सानो हुरीबतास पनि थेग्न सक्ने छैन । जव शक्तिको प्रयोग गरेर संविधान लेखिन्छ यस्तै हुन्छ । त्यसको जड कमजोर हुन्छ । राजा महेन्द्रले कलमले संविधान लेखेनन्, बन्दुकको संगीनले संविधान लेखे । त्यो टिकेन । सन् १९९० को संविधान लेख्न त कलमले नै लेखियो, तर सम्भ्रान्तहरूको कलमले लेखियोे । पहिलोचोटी नेपालमा सन् २००६ पछि लेखिएको अन्तरिम संविधान जनताले आफ्नो आँशु र रगतले लेखेका थिए । त्यसलाई मेटेर अहिलेको संविधानं मान्छे मारेर, कफ्र्यु लगाएर र मान्छेको वलिदानलाई बेवास्ता गरेर फास्ट ट्रयाकबाट लेखियो । त्यसैले यसको जरा कमजोर भयो । सन् १९९० को संविधानले लामो कालसम्म ठूलो आँधीहुरी थेगेको हो । तर वर्तमान संविधानले सानो हुरी बतास पनि थेग्न नसक्ने देखियो । फास्ट ट्रयाकबाट लेखिएको कमजोर संविधान भएकोले नै यसलाई संसारको सर्वश्रेष्ठ संविधान दावी गर्नुपरेको छ । त्यस्तो नभएर ठीक्क ठीक्कको संविधान भएको भए यसले कहिल्यै संसारको सर्वाेच्च भनेर दावी गरिरहनु पर्ने थिएन । त्यसमा विनयशीलता हुन्थ्यो । गल्ति भएकै हो, हामी सच्याउँदै जान्छौं भन्ने आत्मवोध हुन्थ्यो । जव विनयशीलता नै नभैसकेपछि यो संविधान दम्भको दस्तावेज भैदियो । दम्भको दस्तावेज झुक्दैन अवस्था आएपछि आफैँ टुट्छ । यहि चाल हो भने यो संविधानलाई आफ्नै अन्र्तद्वन्द्वले सिद्ध्याउँछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै एकापसमा लड्न थालेपछि त्यसले तिनलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । दुईतिहाइ मात्र होईन ९९ प्रतिशत भएपनि प्रतिपक्ष बेगरको संसदलाई संसद भन्न मिल्दैन । त्यो त भारदारीसभा मात्र हुन्छ । अहिलेको संसदलाई नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वाले भारदारीसभामा रूपान्तरण गरिदिन लागेका छन् । त्यसैले भारदारीसभाले गरेको निर्णयलाई एक प्रतिशतले मात्र अस्वीकार ग¥यो भने पनि त्यो त्यसै डुब्छ । ठूलो जहाज डुबाउन सानो प्वाल नै काफी हुन्छ । बाहिरको आक्रमण भन्दा पनि आफ्नै अन्र्तद्वन्द्वले गर्दा यो संविधान निष्प्रभावी हुने जोखिम अत्यधिक देखिन्छ ।
सैन्य शक्तिको जोखिम
राज्यका दुई वटा संरचना हुन्छन् । एउटा नागरिक संरचना र अर्काे सैन्य संरचना । नागरिक संरचनाभित्र प्रतिपक्षसहितको संसद, अदालत, प्रशासन संयन्त्र सहितको कार्यपालिका, मिडिया, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाजस्ता अङ्गहरू पर्दछन् । यी अङ्गहरू बलिया र स्वाभिमानी भए भने अर्काेपट्टि रहेको सैन्य शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । सैन्य शक्तिले केही गर्न सक्दैन । तर यी अङ्ग एकअर्कासँग लडिरहे भने सैन्य शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दैन । उसलाई चाहिएको कुरा पु¥याउन यिनीहरूबीच नै हानथाप चलिरहन्छ । एउटा यथार्थ के भुल्नु हुँदैन भने अढाई करोड जनसंख्या भएको देशमा एक लाख सेना, ५० हजार भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीले केही गर्नै पर्दैन, उभिइदिए मात्र पनि तिनले खोजेको पाउन सक्छन् । त्यसैले चुनौती निरन्तर छ । नागरिक संरचना कमजोर बन्दै जाँदा सैन्य शक्तिबाट डर त रहिरहन्छ, तर अत्यन्त विविधतापूर्ण समाज भएको र नेपाली सेनामा मधेशी, मुसलमान, जनजातिको ठूलो हिस्सा र क्रिश्चियनको उपस्थिति न्यून भएकोले उसले आफैँ सत्ता हातमा लिनु भनेको देशलाई ठुलो अस्थिरतामा धकेल्नु हो भन्ने कुरा सैन्य संस्थापनले बुझेको हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ दुईवटा भूँईको छिमेकी र अर्काे आकासे छिमेकी भएको देशमा एकैचोटी सैन्य सङ्कट आउँछ भनी प्रक्षेपण गर्नु निराशावादी होला, तर कठिन दिनको प्रारम्भ हुँदैछ भन्न चाहिँ धेरै विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन ।
अहिले नेपाली कांग्रेसले भनिरहेको अधिनायकवाद दुइटै हुनसक्छ– एउटा शासनसत्ता हत्याएको र अर्काे निर्वाचित अधिनायकवाद । अमेरिकामा ट्रम्प, फिलिपिन्समा रोड्रिगो र भारतमा मोदी त्यहाँका निर्वाचित अधिनायकवादी हुन् । अधिनायकवादको अन्तिम स्वरूप सर्वसत्तावाद हो । त्यसमा सैनिक, राजनैतिक, अदालतको अधिकार सप्पै एक ठाउँमा लगेर केन्द्रित गरिन्छ । कांग्रेसले जुन अधिनायकवादको कुरा गरिरहेको छ, त्यो त नेकपाको दईवटै घटकमा छ । तत्कालीन एमालेले राष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात् निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्दै आइरहेको छ । उसले सर्वहाराको अधिनायकत्व हुनुपर्छ भन्न पनि छाडेको छैन । माओवादीले पनि सर्वहाराको अधिनायकवादकै कुरा गर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीकै कुरा गर्छ । संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ भनेर फरक मत लेखेकै छ । नेपाली कांग्रेसले कुनै नयाँ कुरा गरिरहेको छैन । नेकपा दोहोरोको जे प्रतिबद्धता हो त्यसलाई स्मरण गराइदिएको मात्र हो । यति हुँदाहुँदै पनि म किन निराश छैन भने अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउन भन्दा पनि त्यसलाई टिकाउन नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण समाजमा असाध्यै गाह्रो छ । साँस्कृतिक प्रतीकको रूपमा मानिने राजाको अधिनायकवाद एकल जातीय राज्यमा मात्र टिक्न सम्भव छ । त्यस्तै निर्वाचित अधिनायकवाद पनि एकल जातीय वर्चश्व भएको ठाउँमा मात्रै सहजतापूर्वक चल्ने हो । तानाशाही व्यवस्था एकल जातीय सेनाको वर्चश्व भएको ठाउँमा मात्र चल्छ । सर्वसत्तावाद त झन चीन र कोरिया जस्तो एकजातीय वर्चश्व भएको ठाँउमा मात्रै टिक्ने हो । विविधतापूर्ण समाजमा यी चारै किसिमका अधिनायकवाद टिक्न सक्दैनन्, विद्रोह हुन्छ हुन्छ । राजा महेन्द्रलाई आफ्नो अधिनायकवाद चलाउन प्रजातन्त्र शब्द अंगीकार गर्नुपरेको थियो । पञ्चायतमा प्रजातन्त्रको जलप लगाउनु परेको थियो । सत्ता संयन्त्रमा दुई–चार जना मगर, दुई–चार जना गुरुङ, दुई–चार जना राई, दुई–चार जना मधेशी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिलेको सत्ताले पनि त्यही अभ्यास गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । माओवादीमा बहुजातीयता भएकोले ऊ अलि नरम अधिनायकवादी देखिन्छ भने एकल जातीय संरचना भएकोले एमाले कडा अधिनायकवादी जस्तो देखिन्छ । यी दुईबीचको द्वन्द्व मिलाउनै गाह्रो छ । बाँकीको द्वन्द्व त कता हो कता । नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ मनको भूतले बढी नै तर्साए जस्तो छ । १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ र नेपालका जनताले हरेक दश वर्षमा एउटा संविधान च्यातेका छन् भन्ने तथ्य उसले बिर्सेजस्तो छ ।
संरक्षक नै बलात्कारी